I-CBS All Access Student Discount (2020) - Thatha Manje! - Ezokuzijabulisa
Ngokwewebhusayithi ye-CBS, i-CBS All Access izokunikeza izephulelo zabafundi ezikunikeza ngama-25% wesikweletu sakho sanyanga zonke. Lesi saphulelo sisebenza kunketho 'enomkhawulo wezohwebo'. Ngakho-ke, lokho kusho ukuthi abafundi bazothola ukusakazwa kwe-CBS ngamanani ancishisiwe ukuze babuke imibukiso yabo yokufunwa nge-TV ebukhoma efaka umfowethu omkhulu, iNFL, nokunye okuningi.
Abafundi abakhokha u- $ 5.99 ngenyanga ngezinsizakalo ze-CBS All Access Streaming manje bathola isaphulelo futhi bakhokha u- $ 4.50 ngenyanga ngezinsizakalo zokubhalisa. Ngokwethembeka, lokhu kungaba yisivumelwano esihle kakhulu sabafundi basekolishi.
Mayelana ne-CBS ALL Access Student Discount:
I-CBS All Access futhi iyinsizakalo edumile yokusakaza ividiyo bukhoma enikezwa yi-CBS. Le nsizakalo yokusakaza inekhathalogi yayo yezinkulungwane zemibukiso ye-TV ebukhoma eqhubeka unyaka wonke. Kuyathakazelisa ukuthi inketho ye-TV ebukhoma ikuvumela ukuthi ufinyelele ku-PGA Tour, imiqhudelwano ye-NCAA, neminye imicimbi eminingi yezemidlalo ebukhoma.
Ngokuhambisana nalokhu, ungaphinda ubuke imibukiso ye-TV oyithandayo ngokufunwayo nemibukiso ebukhoma nayo. Izinhlelo ze-CBS zifaka iYoung Sheldon, The Big Bang Theory, Indoda enePulani, i-NCIS, kanye nemibukiso yokuqala edume kakhulu ye-CBS All Access, iStar Trek: Discovery kanye neThe Good Fight. Ngaphezu kwalokhu, lokhu kusakaza kunezinhlelo ezindala ezifana ne-Under the Dome neJeriko.
Okutholayo kwisaphulelo sabafundi ku-CBS All Access?
Izaphulelo zabafundi zikuvumela ukuthi ube nohlelo “oluncane lwezentengiso” okusho ukuthi uzoba nezikhangiso ezithile ngezikhathi ezithile ngenkathi ubukela imibukiso yakho oyifunayo. Isaphulelo sabafundi abangama-25% se-CBS All-access singasebenza kuphela kunguqulo yesikhangiso esilinganiselwe kepha hhayi kunguqulo yesikhangiso yamahhala.
Ukuze uthole lesi saphulelo, udinga ukubhalisela isaphulelo sabafundi se-CBS All Access nekolishi lakho noma ikheli le-imeyili .edu.
Lokhu kungenxa yokuthi uma ubhalisa nge-id yakho yasekolishi, i-CBS All Access yazi ukuthi ungumfundi wasekolishi obhalisiwe. Ngemuva kwenqubo yokubhalisa, i-CBS All Access ikuvumela ukuthi usakaze bukhoma kunethiwekhi yabo ekuvumela ukuthi usakaze imibukiso ebukhoma neminye imicimbi.
1. Ezemidlalo ezibukhoma
Isaphulelo sabafundi se-CBS All Access sikunikeza ukufinyelela kwezemidlalo ebukhoma efaka izinkambo ezibukhoma ze-PGA, imidlalo ye-NFL, imiqhudelwano ye-NCAA, neminye imicimbi eminingi yezemidlalo. Ngaphezu kwalokho, uzothola ukufinyelela ekubukeleni imibukiso ebukhoma noma efunwayo. Ngakho-ke, ungayijabulela imidlalo yakho noma kunini.
2. Uchungechunge lwe-CBS Original Olukhethekile
I-CBS futhi ikunikeza ukufinyelela ochungechungeni lwakamuva lwe-CBS ongase ululahle kwenye indawo. Ngokushesha uSir Patrick Stewart uzokuminyanisa ngendima yakhe edumile kulolu chungechunge oluzayo njengoJean-Luc Picard.
Ungakhohlwa ukubuka isizini yesibili yeStar Trek: Discovery. Gcina iso lakho libheke i-Kevin Williamson's, Tell Me A Story. I-dollar eyodwa, izinganekwane, izingelosi eziyinqaba zikunikeza okumangazayo okwengeziwe ngalesi sikhathi.
3. Ubhuti Omkhulu
UBig Brother, imibukiso engokoqobo edume kakhulu nokushaya kakhulu emlandweni weTv. Abantu balinde ngokulangazela isizini ukubukela osaziwayo ababathandayo bevalela ekhaya izinyanga ezintathu. Manje usungakwazi ukufinyelela lo mbukiso kuzaphulelo zabafundi ezithuthukisa ukuzijabulisa kwakho.
Yebo, konke lokhu kungukuklwebheka nje esikugqamisa ngemibukiso ekhethekile ozoyithola kusaphulelo sabafundi se-CBS All Access. Ngemuva kokubhalisela isaphulelo sabafundi, ungafinyelela i-buzz ehlukahlukene ye-TV nezinkathi ezizayo ze-CBS nezinkanyezi zezemidlalo eziyizintandokazi nezibuyekezo zamanje zosaziwayo.
Ngakho-ke, ungahlali futhi usheshe! Bhalisela ukungena kusayithi le-CBS, uthole isaphulelo sakho, futhi ujabulele ukusakazwa nezinsizakalo zesivivinyo samahhala ukuze ubuke imibukiso yakho oyithandayo.
Okunye okunikezwa ngesephulelo sabafundi Okufanele Ukuhlole: